Muuqaal Maqnaansho Laheyn 40 Lacag Bixin Bisha!
Ma ogtahay waxa runtii iigu darbiyo derbiga? Waxaan ula jeedaa, si gebi ahaanba iiga lafurto nuts maalin kasta? Mar kasta oo aan tago dukaanka raashinka, suuqa, filimada, xeebta ... Si dhab ah, WAXYAABO ...
Dad badan oo aan arko maalmahan waa kuwo aad u cayilan ...
Bilaha ama xitaa maalmaha ka baxsan kaadi-dillaaca ama dhibaatooyinka kale ee la xariira caafimaadka.
Haddii aan ku xumahay adiga oo aan hadalkan ku idhaahdo, WAXAA WAXYAABO ... Aniguna waan ballan qaadi karaa, waxaan u maleynayaa in laga yaabo in aad ka sii xumaato haddii aad akhrisid ...
Laakiin haddii aad miisaan badan tahay hadda ... waxoogaa yar, ama wax badan ... waxaad u baahan tahay inaad dareenka aad uhesho maxaa yeelay waxaan rabaa inaan kula wadaagno hal hal qarsoodi ah, baruur dhalaalaya oo qarsoodi ah oo si dhaqso ah u shaqeeya ...
Ka bilaabashada caawa ...
Si aad u dillaaciso nudaha dheeraadka ah iyo dabacsanaan la'aantaada adiga oo aanad ka helin cuntooyinka aad jeceshahay, ama aad shuftadaada ku shubtid jimicsiga.
Laakiin marka hore, waxaan ubaahanahay in aan ka leexiyo qaar ka mid ah dadka ka baxsan boggan oo aan halkan ka tirsanayn.
Waxa aan ku saabsanahay inaan idinla wadaagno maaha wax loogu talagalay ...
Uma jeedo dabeecad siyaasadeed oo sax ah iyo Cadaaladda Cadaaladda Bulshada ee leh "Weynaan quruxsan", oo sheeganeysa inaad noqon karto mid caafimaad leh oo cajiib ah xitaa haddii aad qarka u saaran tahay dhimista buurnaanta ...
Tani maaha dadka loogu talagalay in lagu dhejiyo Facebook iyo xaqiiqda TV-ga xitaa daawashada fiidyowgaan gaaban, oo si fiican u beddeli kara noloshaada daqiiqadaha soo socda.
Sidaas darteed haddii aad tahay mid ka mid ah THEM, waad xiran kartaa boggan hadda ...
Laakiin waan dammaanad qaadi karaa, haddii aad i siisid lix daqiiqo oo kaliya waqtigaaga ...
Iyo haddii aadan ahayn qaar liidan oo si daacad ah u aaminsan in aad tahay qof caafimaad qaba adoo amraya Coke Coke iyo wehelkaaga seddexlahaaga cheeseburger, fries big iyo pie apple ...
Kadibna hal shimbir qoyan oo qashinka ah waxaan ku jiraa inaan kula wadaagno adiga oo isbedelaya noloshaada ...
Laga bilaabo HADDII.
Kanu waa warkaagii aan kugu idhi;
Qalad ha dhigin, waxaad arki doontaa natiijooyin muuqaal ah 7 maalmood.
Haa, waxaad u socotaa natiijooyin FAST toddobaad gudaheeda. Haddii aad sii wado, waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u lumiso wax ka badan 40 rodol bishii iyo subax kasta subax kasta HALKAN , tamar iyo kalsooni.
Kumanaan arday oo aad u qanacsan dunida oo dhan ... ragga iyo haweenka da 'kasta leh ... iigu wac "No Moms Ted".
Dhab ahaantii, halkan waxa ku qoran qaar ka mid ah iyaga ayaa sheegaya in:
Sidaad u aragtid tan, waxaanu shaqeynayaa aniga oo halkan kuma joogo BS ...
Aniguna halkan uma joogin inaan madax kaaga buuxiyo si aan isku mid ahayn in $ 60 bilyan oo miisaan lumis ah, iyo wada-tashiilayaashooda warbaahinta caadiga ah, ayaa kuu sheegi jiray tan iyo markii aad ilmo ...
Ku saabsan waxa aad dhab ahaantii u baahan tahay inaad sameyso, si aad u dhalatid dufankaaga habka sahlan ...
Iska yaree maqaarkaaga adigoon lacag ka bixin sanka kiniinada, jimicsiga, buugta cuntada, "cunto dufan" iyo "cunto diet", iyo jimicsiga shaqada ee dadka caadiga ah ee adiga iyo aniga ilaahay marnaba ma dhegi doonaan.
Anigu waxaan ku dhufanayaa xaqiiqda aan macno-darrada lahayn ... laakiin haddii aad awoodi kartid, iyo haddii aad sii daawato, waxaan ballan-qaadayaa inaan kuu sheegi doono khiyaamaynta baruurta oo ah in caruurtu aanay rabin inaad ogaato.
Wax badan oo ku saabsan kuwa ku jahawareeriya daqiiqad (Waxaan ballan-qaadayaa waxa aan kuugu sheegayo ku saabsan "ajendaha" REAL "warshadaha lumista miyir beelidu way argagaxayaan oo way dhibayaan) ...
Laakiin waxaan u baahanahay inaad ogaatid, haddaad miisaan culus tahay, hadda waxaan haystaa BIT oo ixtiraam u leh ... maxaa yeelay muddo aan ka hor, ma ahayn kaliya dufan. Waxaan ahaa mid weyn.
Markii aan tagay McDonalds, waxay ahayd inay wacaan bangerka King si ay u ...
Laakiin markii aan ku foorarsado khiyaanada hilibka dufcadda ah ee aan kufaraxayo waxaan rabaa inaan kuu tuso, waxay si lama filaan ah u noqotay inay iigu tagto 10 ... 20 ... 50 ... kadibna 100 rodol ...
In 100% badbaado, caafimaad leh, hab fudud oo dabiici ah.
Laakiin ka duwan "dadka dareemaya wanaagga" ee kuu sheega inaad "iska indha tirto kuwa waxyeellada leh" oo kaliya "ku faani" cabirkaaga, waxaan halkan u joogayaa inaan kuu sheego xaqiiqda xaaladda jirta ee aan habooneyn inay dhaawacdo dareenkaaga wax yar oo gaaban ...
Laakiin sidoo kale waa inaad hubisaa inaad dufankaaga ka dhalaalayso, sida rootiga subagga ee digsi kulul.
Marka aad ogaato mid ka mid ah hurgumada cirridka dufcadda ah waxaan kuugu sheegi doonaa daqiiqad, adigoo hoos u dhigaya 15 ... 30 ... xitaa 50 ama 100 rodol waa EASY.
Iyo wax kasta oo aan kuugu sheegi doono bandhigga gaaban waxa lagu taageeray caddayn aan la garanaynin. Kaliya fiiri qaar ka mid ah ardayda:
Mid kasta oo ka mid ah ayaa ka mid ah khiyaamada khatarta ah ee khatarta ah ee aan ku siinayo.
Maanta, waxaan u mahadnaqayaa qarsoodi ahaan inaan idinla wadaagayo adiga, ardaydayda iyo aniga oo kaliya maaha kuwo khafiif ah ... waxaan ku baraarujineynaa caafimaadka, tamarta iyo waayeelka, fiirin iyo dareemo SANNADO da'doodu ka yar tahay da'dayahay ...
Haatan, waxaan leenahay sanooyin badan oo farxad iyo caafimaad leh oo toboneeyo sano ah si aan ula socono kuwa aan jeclaa.
Kaliya ogow tan: Trick Waxaan ku jiraa inaan tuso inaad sii dillaacayso lacagtii dheerayd ee FAST ah, hab fudud oo dabiici ah ...
Laakiin anigu ma haysto wakhti aan ka walaacayo maskaxdaada ama dareenkaaga.
Kaliya waxaan ka warhaynayaa sidii aan ku heli lahaa natiijooyin.
Sababtoo ah waxa aan doonayo inaan ku tuso gabi ahaanba, si aan macquul ahayn u shaqeynaya ...
Mana aha arrin muhiim ah haddii aad u baahan tahay inaad lumiso boqol rodol si aad u badbaadiso noloshaada, ama lumiso toban rodol si aad ugu habboonaato dharka arooska ...
Muhiim maaha haddii aad tahay nin ama naag ...
Maaha arrin qaangaar ah ama dhalinyaro aad tahay ...
Muhiim maaha haddii aad ka timaaddo qoys ka tirsan "dad badan oo la qafaashay" ...
Mana aha arrin xitaa haddii aad tahay caajis.
Sababtoo ah waxa aan rabo inaan kuu muujiyo waa laguu balan qaadayaa shaqo - qabasho.
cunto diidmo ah
Wax su'aal ah kama qabo.
Miyaanan kuu sheegin in ay shaqeyso FAST?
Waxay ku heli doontaa natiijooyin ballanqaad ah 30 maalmood gudahood, iyo dadka qaarkood, waxay qaadataa wax ka yar todobaad si ay u arkaan natiijooyinka muraayada.
Yup, Waxaan ka hadlayaa inaan helno natiijooyin muuqaal ah 7 cisho oo qotodheer.
Iska ilow 7 maalmood ka dib ...
Soo toosi, adoo miisaamaya miisaanka, iyo inaad aragto lambarka DOWN ee isbedelka.
Ii sheeg in aanad ku ridi doonin xaalad fiican maalinta inteeda kale ...
Oo mid ka mid ah khiyaamada khatarta ah ee dufanka xitaa wuxuu shaqeeyaa haddii aad caajis tahay ...
Sababtoo ah runta ayaa ah, adigu ma tiirsan tahay sababtoo ah aad caajis tahay, ama aad cunayso hab aad u badan ...
Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn sababtoo ah waxaad qabtaa dhibaatooyin tayroodh, ama ...
Waxaa laga yaabaa inaanay ahayn sababtoo ah waxaad leedahay "lafaha waaweyn ..."
Oo aad ayaan uga shakisanahay inay tahay xaalad caafimaad oo horey u jirtay oo aanad ka warqabin.
Warka fiicani waa in aan leeyahay qaab fudud oo aan fududeyn si aad u lumiso DHAMMAAN oo ka mid ah miisaankan dheeraadka ah, qaabka ugu habboon, ugu dambeynna tamar hel.
Si gaar ah loogu talagalay dadka aan rabin in ay naftooda gaajoodaan qaar ka mid ah cunto ...
Isku qabso jimicsiga si aad u daba-galisid jimicsi ...
Ama waa inaad sameysid wax kasta oo ku xejinaya qaab nololeedkaaga.
Qarsoodiga aan kuugu imaanayo inaan kuu muujiyo waxaad u baahan tahay dadaal adigoon eber ...
Oo waan ogahay in aad diyaar u tahay, sababtoo ah haddii aad daawaneysid bandhigidan, waxaad ogtahay inaad tahay baruur oo aad rabto in tan ay isbedesho.
Waxaa lagugu daalay been abuurka iyo BS in lagu siiyay naftaada oo dhan, taas oo kuu keeneysa inaad sii wado qaadashada miisaanka.
Waxa kale oo suurtogal ah inaad jirran tahay oo aad daalan tahay adoo isticmaalaya marmarsiiyo si aad u ogaatid sababta calooshaada u soo jiidato sanad walba.
Waqtigan xaadirka ah, bulshada reer galbeedku waxa ay la il daran yihiin cudurada faafa.
Hase yeeshee, "dareenka wanaagsan" dhakhaatiirta iyo guryuhu waxay ka hadlaan dadka "baruurta" sida dabeecadeeda "Polio" ama wax ...
Sida haddii ay tahay wax aan ku dhalanay, oo waxba ka qaban karin.
Taasi waa farqiga u dhexeeya kuwan "dareemaya wanaag" dhakhaatiir iyo aniga ...
Ma rabaan inay "waxyeelo dareemaan" ...
Aniga? Kama daryeelo.
Hadafkaygu waa inuu kaa caawiyo inaad lumiso miisaanka, oo waxaan la imaanayaa hab sahlan oo lagu baraarujin karo baruurta , xitaa haddii aad necbahay qashinka iyo jimicsiga intaad ...
Marka ugu horeysa ee aad u isticmaashid khiyaanadan maanta , miisaanka dheeraadka ah iyo daboolka aad u dhaq-dhaqaaqa ah ee aad ku socotid wuxuu bilaabi doonaa inuu baxo.
Waxaa jira sabab kale oo aan ku siiyay si toos ah ...
Waxaa jira xiriir toos ah oo u dhexeeya baruurta iyo horumarinta cudurrada naf-gooyada ah.
Ma ogtahay in miisaan kasta oo aad u culus tahay, waxay kordhineysaa fursadaha aad ku heli karto cudurro aad u xun sida sonkorowga, kolestaroolka sare, iyo hypertension ilaa 3%?
Sidaas awgeed haddii aad culus tahay 10 rodol oo keliya, taasi waxay ka dhigan tahay inaad 30% ka badan tahay in aad horumariso wax xun.
Aan daacadno, imisa miisaan oo culus ma tahay ?
Qeybta ugu hooseysa waa, dufanka aad adigu tahay, aad u badan tahay inaad u dhinto sababtoo ah.
Oo aniguna iiga addeec, ninna yaanu ogaan kan iga baqay. Waxaad aragtay, marwalba ma i soo wicin "Ma maydhin wax daawo ah." Aniga hooyaday, waxaan ahaa "Teddy Bear" ... waa qoryaheeda, wiil yar oo yar yar ... hooyaday iyo aabahay waxay ahaayeen waxaad u yeeri lahayd "balloon weyn" , sidaasi darteed waxay i arkaan aniga oo ah sidii caadiga ahayd ...
Laakiin carruurta dugsiga, waxay leeyihiin magacyo kale oo ii ... magac xun ...
Waxaan xusuustaa ku qarinta qubeyska inta lagu jiro fasalka jimicsiga, ama tagista kalkaalisada caafimaadka dugsiga iyo dhaawaca dhaawac, si looga fogaado ceebta ah inaanan awoodin inuu kor u kiciyo, ama fadhiisto, ama jajab hal jilbaha jidka ...
Dhibtii ugu xumeyd waxay ahayd markii aan ciyaaray kubada kubada cagta. Marnaba ma iloobi doono ceebtii gubatay ee aan dareemayay inaan sugayo inaan helo mid ka mid ah kooxaha ...
Freddy Bavaro, waa ciyaartoygii ugu fiicnaa ee fasaladayda iyo kuwa ugu xumaa, mar walba waa mid ka mid ah "kabtanka kooxda ..."
Qof kastana wuu ogaa "Tubby Ted" ayaa noqon lahaa kii ugu dambeeyay. Mid kasta oo kooxdu i soo martay, carruurta kale ayaa ka caban lahaa inay la ciyaaraan "dameer ..."
Waxaan dareemay wax aan faa'iido lahayn ... taasoo iga dhigtay inaan ka fogaado isboortiga iyo jimicsiga gebi ahaanba, oo waxaan ku daadinayey murugadayda cuntooyinka qashinka iyo soodhada sonkorta leh.
Tani waxay sii waday dhamaan kuliyadaha iyo noloshayda qaangaarka ah.
Mahadsanid waxaan lahaa xaaskeyga xaaskeyga Darlene, iyo labadayada waynaa ee cajiibka ah ... Darlene waxa ay ku dhibtoonaysay miisaankeedii oo dhan nolosheeda, sidoo kale, taas oo ah sida aan ugu xidhnay marka hore ...
Waxaa jirey waqtiyo markii aan labadaba ku dhajino cunto kariska, ama ku soo biiray jimicsi, ama waxay qaadeen dhaqdhaqaaq si ay isku dayaan in ay lumiyaan miisaanka ...
Hase yeeshe, isku daygaas ayaa ahaa mid gaaban. Darlene wax kasta oo aan ku guuldaraystay inaan lumiyo ayaa soo laabaneysa mudo dheer, anigana waxaan ka culusyaa weligaa ...
Waxaan xusuustaa in aan qoyskayga ku soo celiyo beerta nasashada ee wiilkayga sideedaad ee siddeedaad. Waxa uu riyoonayay inuu fuulo gogolka boodhka bilaha ah ...
Laakiin markaan aad u dufanahay inaan ku haboonaado suunka suunka dhexdiisa, waxay ii sheegeen inaanan tegin karin raacista, sidaas darteed wiilkaygu ma noqon karo.
Wuxuu ku qayliyey wadada oo dhan guriga ... oo waxaan iligeygii iligeyga iga hayey. Ilmaha oo ceeb ah ...
Laakiin haddii aad u maleyneyso in ay xun tahay, taasi waxba ma ahan marka la barbardhigo waxa ka dhacay kulankayga dugsiga sare ee sannadkii hore ...
Waxaan jeclaan lahaa in maalintaas la qaato qalliinka kanaalka oo aan lahayn suuxdin, laakiin Darlene iyo waxaan ku jirnay fasalka iskuulka sare ... taasi waa sida aan marka hore u kulannay ...
Waxay rabtay inay aragto qaar ka mid ah saaxiibada gaboobay ee iyada ah, sidaa darteed waxaan rabay in ay la tagto iyada ...
Waxay ahayd dayax-gacmeed dibadda ah maalin kulul-kulul bishii July. Halkaan waxaan ahaa, dhidid sida doofaarka, oo ku fadhiya mid ka mid ah kuwa ka soo jeeda qoryaha aluminium cawska ...
Iyada oo wejigeyga wejigeeda ku dhajiso saxan buuxa oo cunaya caloosha, halka qoyskeygii hore ay joogsadeen kudhow ...
Cadaadiskii hore ee jirey Freddy Bavaro ayaa ku sugnaa miiska cuntada. Waxaan ku qabtay isaga oo indho indheynaya wejiga wejigiisa, oo wax u jajabiyay xaaskiisa ... waxa ay aheyd mid isku mid ah oo uu u isticmaali jiray mar kasta "dameer dufsi" uu ku dhufto kooxda kickball ... Marka si lama filaan ah, waxaan maqaley codka jilicsan ... codka qoorta birta ...
Ka dibna, SNAP!
Lugaha kursigaygu wuxuu u jajabiyay sida cirroolaha, waxaan aaday dhulka oo burburay sida boodbood weyn oo boodbood ah. Taabadaydu waxay ka buuxsantay salad iyo saladh baradho ah, iyo koobkay Jumbo oo la yiraahdo brew, ayaa daadiyey dhamaanba ... aniga oo dhib ah ayaan ku dhibtooday, anigana iskama soo qaado. Waxaan u jilicsanaa sida caleenta xeebta ...
Waxaan maqli lahaa LAUGHTER dhamaanba agagaarka ... anoo si dhaqso ah ayaan dib ugu soo laabtay fasalka ciyaaraha jimicsiga ...
Qofna ma guurin muruq inuu i caawiyo, ilaa Darlene loola cararay, waxaana iga caawiyay inaan dib ugu noqdo cagahayga. Ka dib markii ay iga caawisay nadiifinta, waxaannu guriga tagnay. Laakiin hoos u dhaca ugu xumaa ee noloshayda ayaa kaliya uun bilaabay!
Freddy Bavaro ayaa duubay dhamaan dhacdadii cajiibka ah ee telefoonkiisa ... wuxuuna ku dhajiyay YouTube ...
Waxay udheeraatay "viral" habeenkii, waxaana lagu wadaagay Facebook 11,576 qof.
Waxaan ogaadey subaxnimadii Isniinta, markii aan fadhiyay meertadayda, waxaanan ogaaday faragalinta shaqaalahayga ee agagaarka kumbuyuutarka oo ku qoslayay xanaaqooda ...
Oo iiga sheekee aniga ...
Anigu waan kacay, waan u bartay iyaga, waxaan arkay naftayda sirta ah ... waxaanay cowska ku ciribtirtay wejigii buuxa ee spaghetti ...
Waxaan ku riixay gees iyo waxaan ciyaaray filimka bilowgii bilowgii ...
Nidaamka Biyaha Qaadista
Oo halkaasaan joogey, waxaan ku riixay fanka, halka Freddy ii ixtiraameysay ... sida hadalka oo ahaa sheeko qaas ah National Geographic video ...
"Halkan waa Dhulka Beerta ee ku yaalla deegaankiisa dabiiciga ah, isaga oo wejigiisu wajiga u daadanayo barkin ..."
Dhammaan majaajilooyinka, cay, iyo sharafjabinta waqtigaygii ayaa igu soo laabtay. Waxaan xasuustaa dareen sida aan rabay inaan ku gurguuro daloolo qoto dheer oo mugdi ah oo dhimanaya ...
Midkoodna ... ama wax cuni pizza. Waa kuwee sida aan u sii waday.
Sidee baan u ducaynayaa inaan eego ... isagoo keligiis fadhiya qaar ka mid ah roodhida dufanka leh, isagoo xirxiray foorno badan oo ballaaran leh oo dhan, halka aan indhahayga u soo bandhigay ...
Dhowr maalmood ka dib, markii aan haystay baaritaan caafimaad oo sanadle ah, waxaan ku dhuftay wejiga iyada oo la ogaaday in miisaankayga uunan ahayn kaliya iga dhigaya saameyn ku qosol leh internetka ...
Waxay i diley aniga
Dhakhtarkaygu wuxuu i baadhay cadaadiska sare ee Blood-ka iyo nooca 2-aad ee Diabeteska, wuxuuna i siiyey digniin culus oo ah in aan qabo madax-dhiigfuranka ama wadne-istaaga wakhti kasta, haddii aanan ka badneyn 100 rodol.
Waxa uu ku qoray warqad dhakhtar ah oo loogu talagalay farabadan oo daaweyn kala duwan, oo ii soo diray baaskiil ...
Hadda, tani waa marka qof macquul ah uu naftiisa ku odhanayo, "WAXAAD ISKU GARAN. Waqtigeyga si aan u helo badeecad aan xumaa oo muuqaal ah oo naftayda badbaadiya! "
Laakiin aniga ma ihi.
Waxaan dareemay awood buuxda oo aan rajo lahayn.
Anigu xitaa xitaa ma aanan dhibin inaan joojiyo farmashiyaha oo aan qaato daawooyinkayga ...
Taa bedelkeed, waxaan ku dhuftay McDonald's gaari-waday oo soo qaaday cunno ku filan oo ay ku dhufaan faras. Dabadeed waxaan gurigeyga u tegey oo waxaan isku tuuray sariirta, si aan wajiga iyo wejigaba uga soo baxo TV-ga hortiisa. Carruurtu waxay joogeen iskuulka, xaaskeyna way shaqeynayeen. Waxaan lahaan lahaa saacado dhowr ah si ay u beertaan nabadda ka hor inta aysan soo laaban ...
Laakiin waxaan maleynayaa inaan naftayda cuno galay miyir beel ... maxaa yeelay waxa soo socda oo aan ogaa, waxaan ka soo kiciyay qayladaydii by codkii xanaaqay naagtaydii, Darlene.
Waxay ii taagan tahay. Raadinta daawooyinkayga ee gacanteeda.
Dhibaato, waa in ay ka heshay boorsooyinkayga ...
"Ted, WAA MAXAY Naftaada ayaad samaynaysaa?" Ayay ku dhawaaqday. "Waxaan u maleynayaa in aanan u baahneyn in aan waydiiyo sida dhakhtarku u go'an yahay - daawooyinkan waxaa loogu talagalay cadaadis dhiig oo sareeya iyo sonkorow!"
Waxaan tuuray sanduuqyada waaweyn ee madow ee xabadka iga saaran, ayaa tirtiray jalaatada shukulaatada ah ee afkayga igu jirta, waxaanay ku qososhay iyada niyad jab ...
"Muhiim ma ahan waqtigan. Waxaan doonayaa inaan dhinto da 'yar iyo baruur, sida aabahay. Waxaa laga yaabaa inaan aqbalno, waanan ku riyaaqi doonaa waqtiga aan ka tagay. "
Taasi waa markii aan maqlay codkii gabadha 6-jirka ah, Annabelle ...
"Aabe ... waxaad dhimanaysaa?"
Waan fiiriyey. Annabelle ayaa istaagay albaabka, iyada oo xayeysiiskeedu yar yahay.
Oo markaan arkay muuqashadii naxdinta laheyd oo wejigiisiina ilmada ka fiirisay, oo ilmo indhaheeduna indhahay ku ...
Sannadahaygii oo dhan oo aan xumaa oo aan dareemayo ceebtayda naftayda ... waxna kuma dhicin qalbigayga sida maqalkiisa gabadhaydu ii sheegayso aniga.
Subaxii xigay, xaaskeyga ayaa ii sheegey in ay doonayso in ay carruurteeda qaadato oo ay sii wado walaasheed gurigeeda muddo wakhti ah. Way iska caddahay in ayan dhammaantood isha ku haynin inaan naftayda sii dilo.
Oo iyana way tageen. Oo waxaan labadii maalmood ee la soo dhaafay sariirtayda ku jirey, waxaan ku dhex jiraa murugadayda ...
Maxaan u malaynayay inaan sameeyo, jiido qashinka ceelka ee jilicsan ee jimicsiga waxaan ku biiraa fasal aerobi ah?
Waxay dhammaantood iigu qoslaan , sida carruurtu ku soo laabtaan fasalka jimicsiga ... haddii aanan u dhimanin wax laga xishoodo, cadaadis ku dhaca wadnahayga ayaa laga yaabaa in ay ku dhacdo sida bakeeriga ...
Anigu ma noolaan karo on saqaf iyo berry, ama wax kasta oo ugu dambeyntii "cunto mucjiso ah ee bisha" ayaa sheegay in ay sameeyaan ...
Waxaan mar hore isku dayay dhammaan cuntooyinkaas, waxayna igu sameeyeen wax aad u liidata, oo aad iyo aad u argagaxsanaaya, qoyskaygu wuu ka fiicnaan lahaa aniga la'aantiis ...
Laakiin waxaan sidoo kale ogaa wax kale: Waxaan lahaa ku filan. Waan bukay inaan nafteyda been sheego.
Xanuun ka dhigashada cudurdaar. Xanuun u dhaqma sida dhibbanaha.
Habeenkaas, sida aan sariirta jiifsan ... keligaa ... naftayda ayaan isweydaarsaday tuubo jilicsan iyo laydh shidaal ah ...
Jawaabtii baa iga heshay!
Waxay ahayd mid ka mid ah wadiiqooyinka wararka ee dibada. Weriye ayaa wareysi la yeeshay dhakhtar waayeel ah, dhakhtar farsamo oo ka soo jeeda Switzerland oo leh shaar baqsan oo dheer
Waxa uu sheegay in sida uu kiliinikada ay u sameysay baaritaan cusub oo cusub, baadhitaan qoto-dheer oo sababay dadka sababta xad-dhaafka ah XAQIIQ LA'AAN lihin waqtigaan adag ayaa miisaanka culus.
Ma jirto wax aad ku sameyso " rabitaanka " ... Waxba ma laha inaga oo nala sameeyo " caajis " ...
Waa arrin ku saabsan xaqiiqda ah in maskaxdaada ay HAYWIRE tagtay sababtoo ah waxaad cuneysid hab qaldan mudo dheer ... Hadda, maskaxdaada waxay u direysaa calaamadaha khaldan ee calooshaada.
Waxaan kaa tagi doonaa dhammaan waxyaabaha cilmiga sayniska ah ee uu ku soo bandhigay. Qeybta ugu hooseysa waa tan: waxaad qiyaasi kartaa inaad tahay gaari, iyo "gaasta gaaska" wuxuu kuu sheegi doonaa maskaxdaada inaad tahay "wax madhan" mar walba ... xitaa haddii aadan run ahayn ...
Xaqiiqdii, xitaa markaad haysato haan buuxda, BRAIN waxay u maleyneysaa inaad hoos u socoto - sidaa daraadeed waxay kuu sheegaysaa inaad u baahan tahay inaad iska joojiso jajab badan si aad u noolaato.
Tani waa sababta aad u heshay jadwalkaas ... waana sababta aad u dallacayso cuntada BAD, oo aad uga dalbato in ka badan dad kale. Sababtoo ah tani waa waxa jidhkaaga loo isticmaalo. Maskaxdaada waxay u maleyneysaa, in cuntada xun ay tahay "gaas."
Xitaa marka calooshaadu buuxsanto, maskaxdaadu waxay kuu sheegaysaa inaad u baahan tahay gaas badan. Sidaas darteed waxaad joojisaa gaaska, ka dibna ugu dambeyntii waxaad bilaabeysaa buuxinta gasacadaha gaaska iyo iyaga oo ku keydsan jirkaaga, sababtoo ah maskaxdaada waxay u maleyneysaa inaad ka bixi karto waqti kasta.
Ka dibna dhakhtarka Swiss ayaa sheegay in wax yar oo iga dhigtay Doritos ...
Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah cilmi-baarista ugu muhiimsani ay ku heleen helitaankan cajiibka ah ee uu ku socday Jaamacada oo kaliya dhowr saacadood 'baabuur gurigeyga ...
Sidaa daraadeed maalinta xigtay, waxaan nafteyda ku ridayey gaarigayga waxaanan safar u galay ...
Ka dibna waxaan saacado ku qaatay maktabadda caafimaadka ee xerada, inaan soo daayo habeenkii oo dhan markii aan qoday daraasado dhammaad leh iyo joornaalo cilmi baaris ah ...
Anigu waxaan helay khabiir ku takhasusay buugga la yiraahdo Dr. Louis Aronne, Agaasimaha Barnaamijka Miisaaniyadda Qiimaynta ee Cusbitaalka New York-Presbyterian Hospital / Xarunta Caafimaadka ee Weill Cornell ...
Waxa uu taageeray waxa uu dhakhtarka Swiss u sheegay. Sababta ay dadku u arkaan inayan macquul ahayn in lumiyo miisaanka, inkastoo ay isku dayeen noocyada kala duwan ee cuntooyinka iyo jimicsiga, sababtoo ah sannado ka dib cunista - iyo cunnooyinka - cuntada caadiga ah ee reer Galbeedku dhab ahaantii waxay bedeshaa maskaxdaada.
Si aad u noqotid mid gaar ah, cuntada Galbeedka ee aad ku jirtay noloshaada oo dhan waxay wax u dhimaysaa waddooyinka calaamadaha ee hypothalamus, taas oo qayb ka ah maskaxdaada oo xukuma dheef-shiid kiimikaadkaaga.
Sidaa darteed waxaan ku xayiray, qodaya, oo si qoto dheer uga soo degay godadka bakaylaha ... Taasna waa markii aan soo gaadhay daraasad cilmibaaris ah oo lagu daabacay Wargeyska Ingiriiska ee Nafaqada, oo aan waligeed lagu baahinin USA ...
Waxaan ogaaday in koox cilmi-yaqaan ah oo ka tirsan Jaamacadda Liverpool ay ogaadeen in cuntooyinka caadiga ah ee reer Galbeedku ay geli karaan dhaqdhaqaaq silsilad "dheef-shiid kiimikaad ah."
Taas macnaheedu waa maskaxdaada waxay ku bilaabmeysaa adiga oo leh calaamado iskood ah oo waalan ...
Waxaad u maleyneysaa in aad gaajooneysid oo aad cuntid dufan, cuntooyin aad u sarreeya, markaad run ahaantii u baahnayn ...
Waqti ka dib, cuntadaada ayaa dhab ahaantii dhaawac u keenta xasaasiyadaha sameeya calaamadaha dhammaan hypothalamus. Tani waxay burburinaysaa awoodda jirkaaga ee lagu xakameeyo miisaankaaga iyo dheef-shiid kiimikaad ...
Haatan, jidhkaagaagu wuxuu ku jiraa habka "kaydinta dufanka" joogtada ah halkii uu ka jiri lahaa dufanka BURNING!
Fariimaha aad maskaxdaada kuugu soo dirayso rabitaanka cuntadaada iyo gaajadaada ayaa dhamaantood isku qasan ...
Markaad buuxdo, maskaxdaada ayaa kuu sheegeysa in aad wax cuntid.
Markaad jidhkaagu waajib kugu tahay inaad gubato kalooriyooyinka, maskaxdaadu waxay u sheegeysaa inay MAXAA KA YIHIIN KARAA.
Warka fiicani waa, waxaa jira hab loogu talagalay in lagu dhameeyo "dhibaatada dheef-shiid kiimikaadka" oo aad maskaxdaada si toos ah u ...
Sidaa daraadeed JOOJINTA WAXYAALO kugula shaqeyneyso, oo bilawdo inaad shaqeyso WAXAY ... u diraya jirkaaga calaamadaha saxda ah, halkii ay u diri lahaayeen calaamadaha kuugu daalinaya dufanka oo ku sameysanaya dufan ...
Xaqiiqdii, waxaa jira hal shimbir hilib dillaac ah oo aad isticmaali karto, si aad jirkaada uga bedesho "Dheef-shiid kiimikaadka" ilaa "metabolic hyper-efficiency" ....
Sidaa daraadeed, laga bilaabo maanta, waxaad ka dillaaci doontaa daboolka, kaa gubi doonaa miisaankaaga dheeraadka ah, iyo xajinta caloosha xitaa inta aad seexaneyso ...
Haddii aan lahayn shaqo adag oo loo baahan yahay.
Waqtigaan xaadirka ah, waxaa laga yaabaa inaad la socoto fikiro isku mid ah oo aan lahaa, sida aan sameeyay sahankan cajiibka ah ...
"Sababtoo ah maahan khaladaadka dufan ee barafka lagu barayo dhakhtar kasta, oo ku qoran buugta miisaanka lumay iyo wargeysyada caafimaadka?"
Sababta waa mid sahlan:
Suuqa ganacsiga ee $ 60 bilyan oo miisaankeedu wuxuu bixiyaa lacag aad u badan si loo hubiyo in macluumaadkaan lagu aasay.
Xaqiiqdii, waxaan ogaaday in qaar ka mid ah jaamacadaha isku midka ah ee sameeyay daraasado ku saabsan dhibaatada dheef-shiid kiimikaadka ...
Sidoo kale aqal malaayiin doolar oo deeqo ah iyo deeqo ka yimaada shirkadaha Big Pharma - kuwaas oo iibiya kaniiniyada lumitaanka, sonkorowga iyo daawooyinka cadaadiska dhiigga oo sareeya, iyo dhammaan noocyada kale ee daroogooyinka kale ee aad u baahan doonto sababtoo ah miisaan culus.
Haddii cilmi-baadheyaashan iyo jaamacaduhu ay doonayaan inay sii joogaan mushaharka Big Pharma, waxay ujirta inay danta ugu fiican ku leeyihiin KEEP ee cilmi-baaristooda hoos-yimaada ... sidaa daraadeed Big Pharma waxay sii hayn kartaa kiniinnadaada iyo inaad hodan ku qaadato kharashkaaga.
Waxaan helay waxyaabo badan oo qarsoodi ah oo aan horey loo shaacin ee ku yaala maktabadda jaamacadaas ... laakiin waxay ahayd inaysan marnaba dad la wadaagin, hadda waad ogtahay sababta.
Waxaan diyaar u ahaa inaan dhigo waxa aan baranayay imtixaanka ...
Sidaas darteed waxaan u go'aamiyay bilaha soo socda hal gool oo keliya ...
Jooji miisaanka iyo ka noqoshada nooca 2aad Diabeteska iyo cadaadiska dhiigga oo sareeya.
Oo waxaan u socdey inaan sameeyo iyada oo aanad qaadin raashin dufan ah, oo aanad wakhti aanad wakhti ku dhicin on treadmills iyo nafsad ahaanteyda aniga oo badh ah dhimasho ...
Sida pounds bilaabay in ay dhalaalaan , iyo tamaradayda iyo rajadaydu soo laabtay, waxaan bilaabay inuu ogaado ...
Tan iyo maalintii aan ku dhashannay, waxaanu beeninay waxa loo baahan yahay in lumiyo miisaankana ka dhigo.
Tani waa sababta haddii aad hadda miisaan culus tahay, ama aad qaadato qaar xoog leh oo dufan dheeraad ah ku jira meelaha khaldan, ma aha khaladkaaga.
Waxaa jira macluumaad badan oo is khilaafsan halkaas oo aadan aqoonin cidda ku kalsoon tahay iyo waxa la aaminsanyahay.
Xitaa tan ka sii daran, badanaa "talo" ka jirta khabiirada la yiraahdo waa miisaan qumman marka ay timaado miisaanka iyo joogista, caafimaad iyo farxad.
Ma aha oo kaliya inuusan kuu caawinayn, waxay dhab ahaantii kuu keenaysaa inaad miisaan korodhsato oo aad xawaareyso geedi socodka gabowga!
Dhowaan, waan ka soo baxay sidan oo kale:
Iyo sida aan ugu faraxsanahay marka aan arko natiijooyinka aan ku arko muraayada subax kasta, xitaa kuma bilaabi kartid inay sharaxdo farxadda aan dareemay, iyada oo aan ogaanay in qoyskeygu uu ixtiraamo, sida aniga naftayda ah.
Waxaan u muujiyay xaaskeyga Darlene dufankeyga qarsoodi ah, waxayna u isticmaashay in lumiyo 27 rodol bil ah ...
Aniga waxaan la wadaagay walaalahayga ... iyaguna sidoo kale waxay ku dhufteen in ka badan 120 rodol oo isku dhafan.
Waxaan soo daabacay sawirada miisaankayga lumay on boggeyga Facebook, iyo markii ay soo martay fayras, waxaan si lama filaan ah u lahaa ragga iyo haweenka aduunka oo dhan oo dunida oo dhan i dira "codsiyo saaxiibo ah" oo wax i waydiiya qarsoodigayga ...
Sidaa darteed waxaan la wadaagay talooyin dhowr ah oo iyaga la socda, oo ugu dhakhsaha badan waxay iigu soo direen sawiradooda ka hor iyo ka dib waxayna wadaagaan sheekooyinka guusha ...
Tani waa markii aan go'aansaday in aan soo ururiyo dhammaan bilihii cilmi-baarista iyo xogta hal nidaam oo fudud, nidaam tallaabo tallaabo ah oo sameeya hal wax, iyo hal wax uun ...
Daadi baruurtaada oo gubi inta ugu badan ee aad rabto, DAMB.
Mid ka mid ah gabadha, Jane S. oo ka timid Sarasota, Florida, ayaa boggeeda hore ku soo daabacday boggeeda Facebook, oo ay weheliso farriintan:
Taasi waa marka xaaskeyga Darlene ka bilaabato joking si aad u wac "Mr. No-Nonsense, "iyo waxaan u maleynayaa inaad dhihi karto waxay noqotay naaneyskeyga ... hey, maan maskaxsanayn ... hubaal waan garaacayaa dadka iigu yeedhaya" Teddy Bear "ama" Tubby Ted, "ma odhan lahayd?
Markii aan bilaabay sameynta Nidaamka Nidaamka Nidaamka Biyo Nadiifinta ee loo heli karo dadwaynaha, dib u eegista ra'yiga ah iyo sawirada cajiibka ah ayaa lagu sii shubay ...
Dhamaantood waxay awoodeen inay helaan natiijooyin cajiib ah iyaga oo si fudud u qaata dareenkan, "haba yaraatee" habka loo lumiyo miisaanka.
Isagoo dib u eegaya sheekadayda, waa adag tahay in la qiyaaso in hal sano ka hor, waxaan sariirtayda ku dhuftay dareemey ka xumahay naftayda, qiyaasta xaaskeyga ayaa iga tagay ...
Haddaad i eegto, xitaa way adagtahay in la aamino inaan ka fiicneyn 100 rodol oo cayilan.
Laakiin ma ahan dhibbane.
Hadda waxaan nolosha ka arkayaa muuqaal guud ahaan kala duwan ...
Sababtoo ah Iyada oo ay weheliso caloosha weyn, aan caafimaad qabin, nooca 2aad ee Sonkorowga iyo Cadaadiska Dhiig Sarreeya ayaa la baxshay in ka badan lix bilood hadda.
Ardaygaygu waxay eegayaan oo dareemayaan cajiib, sidoo kale, sida aad arki karto:
Xitaa haddii aad tahay nin caajis ah.
Hadda waa jihadaada ...
Anigu waxaan ugu yeeraa Nidaamka Nidaamka Biyaha Nadiifinta Leh ...
Oo waa nidaam keliya oo meesha ka baxay oo muujinaya hal sadare oo khiyaano ah oo jidhkaaga u rogaya "xinjabin la'aanta" ilaa "metabolinka-kor-u-qaadka."
Daqiiqad qarsoodi ah oo qoyan oo qarsoodi ah ayaa si caan ah u cadeeysey inuu macnaheedu yahay inuu gubo baruurta jidhkaaga inta aad huruddo, si aanad u kicin oo kaliya hillaaca, laakiin waxaad ka buuxsantaa tamar iyo cakirnaan aanad dareemin muddo sanado ah, laga yaabee xitaa tobanaan sano.
Haddii aad u maleyneyso inay tani noqon doonto mid adag, mar kale ka fikir ...
Sababtoo ah waxaan aaday jidkeyga si aan u sameeyo nidaamkan ku habboon qofkasta oo aan haysan waqti ama daneyn in uu shaqeeyo saacado maalintiiba, ama wax kasta oo kale u sameeya si loo yareeyo qaab nololeedkooda.
I rumee, anigoo tiirsan iyo taam ah sida aan arkayo, ma ahan taageere weyn oo jimicsi ah. Sidaa darteed waxaan doonayaa in aan hubiyo in aan sii hayno ugu yaraan qiyaasta ugu yar, iyadoo weli heleysa natiijooyinka ugu sarreeya.
habka ugu fiican ee luminta miisaanka
Bal qiyaas aragtidaada iskuulada soo socota, ama qoyskaaga soo socda ... oo ay ku weydiinayaan qarsoodigaaga ...
Bal qiyaas sida aad u fiicneyd inaad dareentid in dhammaan arimahaaga caafimaad ee aad miisaankoodu ka soo baxeen ay dhamaantood yihiin kuwo lumay ...
Taasi waa bilowgii sida ugu yaabka badan noloshaadu u noqon doonto, marka aad isku daydo "habka caajis ah" in lumiso miisaanka ... .iyo wax badan oo ka mid ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato inaad shidaal dufanka ka saarto jirkaaga FAST waa gudaha gudaha koorsadan, kaas oo aad si dhakhso ah u arki karto kombiyuutarkaaga, casrigaaga ama kaniiniga.
Waqtigan xaadirka ah, Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nadiifinta Nafaqada ee Nonsense ayaa ka caawisay in ka badan 16,300 rag iyo dumar kale Nimankooda, haweenkooda iyo xubnaha qoysku waa sida ay ugu mahad celinayaan sida ay yihiin.
Haddii aysan tani ku fiicnayn caddayn kugu filan, ka dibna ku laabo boorsadaada Doritos iyo muuqaallada TV-gaaga ah, sababtoo ah qofna - ma i, ama qof kale - waxay kugu caawineysaa inaad ku caawiso.
Laakiin labadaba waan ognahay, waxaad dooneysaa inaad noqoto sheeko guuleysi oo soo socota. Waxaad rabtaa inaad ku biirto kumanaan ragga iyo dumarka da 'walba, oo ka kala yimid adduunka oo idil, kuwaas oo soo maray natiijooyin cajiib ah oo ka yimid nidaamkan fudud ee dhibkii dhintay.
By habka, kuwani waxay ahaayeen dadka tijaabiyay "beta" version ...
Tan iyo markaas, nidaamka dijitaalka ah ee sahlan ayaa la cusbooneysiiyay oo la hagaajiyay talooyin iyo xirfado badan si ay u sahlanaato inay gubto dufanka, si aad u noqoto inaad noqoto xabbad dhamaystiran oo aan miisaanka lumin.
Waa 100% "qof caajis ah" saaxiibtinimo ...
Sababtoo ah tani waa nidaam keliya oo gacanta ku haya gacantaada oo aad ku soconayso tallaabooyinka, si markaa aad u hesho daqiiqado aad ku heli karto gacmahaaga, waxaad awoodi doontaa inaad ka noqoto arrimahaaga miisaankaaga iyo inaad bilowdo helitaanka jirkaada had iyo jeer ku riyootay ...
Markaad si fudud u jajabiso buunshaha dheeraadka ah xitaa markaad huruddo!
Iyo inaad hubiso in guushaada la damaanad qaaday , waxaad xitaa la xiriiri kartaa wakhti kasta oo aad rabto inaad weydiiso su'aal ku saabsan koorsada, ama xaaladdaada.
Tani dhab ahaantii waa cirifka jilitaanka. Waqtiga xaddidan, waxaan kaliya oo kaliya kuu sheegi karaa ilaa 10% waxa aad ku ogaan doonto gudaha nidaamka buuxa ...
Taas oo dib loo eegay loona habeeyay mabaadii 'MD MD oo aad loo ixtiraamo', sidoo kale waxaa ka mid ah talooyin ka yimid miisaanno kale oo khasaare ah iyo khabiiro fayaqabka.
Waa inaad sidoo kale ogtahay in kastoo tani tahay badeeco cusub, maaha doofaarka guinea. Ka hor inta aanan xitaa qorin bandhigidan, waxaan horay u daaweynay in ka badan 16,300 oo rag iyo haween ah oo ka kala yimid adduunka oo idil.
Waad ku dabooshay, haddii aad tahay nin ama naag, oo aan loo eegin da'daada ...
Sababta tani waa mid fudud ...
Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nadiifinta Nafaqada ee Nolosho la'aanta ah ayaa xalliya dhibaatadaada heerka ugu muhiimsan
Ma aha mid ku-meel-gaadhsiis ah ama "gargaar band ..."
Marka mawduucaaga miisaankaaga dib loo noqdo, si joogto ah ayaa loo ciribtiri doonaa si wanaagsan.
Maya mays, buts ama murqaha.
Si dhakhso ah, waxaad noqon doontaa ugu dambeyn xor ka ah xishoodka, ceebta, niyadjabinta iyo kalsoonida hoose ee la yimaada dhamaanba culeyska dheeraadka ah ee aad ku qulqulayso agagaarka ...
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad ku faanto sharaf aad u dheer, kalsooni iyo kalsooni ... sababtoo ah adigu maahan midka kaliya ee ogaanaya sida wanaagsan ee aad u eegto ...
Dad kale ayaa hadda kugula jeeda dabacsanaan iyo xitaa hinaaso, waxayna doonayaan inay ogaadaan baruurta aadka u ba'an ee qarsoodi ah ...
Weligaa kuma dhicin inaad addoon u noqoto addoonto Big Pharma, oo ku xiran cadaadis dhiig oo sareeya iyo daawooyinka sonkorowga maxaa yeelay miisaankaaga ayaa ku xanuunsanaya dhibaatooyinka caafimaad ...
Kuwaasina waa laba ka mid ah arrimaha caafimaadka ee aad u baahan tahay inaad la tacaalto markaad ogtahay dufankaas qarsoon.
Inaad noqoto miisaan aad u culus sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha ugu horreeya ee jilicsanaanta galmada iyo luminta libido ragga iyo dumarka ... kuwaas oo burburin kara cilaaqaadka iyo qoysaska jeexaya.
Hadda waxaad fahamsan tahay inaad adigu xakamayso jilicsanaantaada ... Oo waxaad tahay inaad dareento xoriyad cusub. Sababtoo ah, laga bilaabo maalintaas, ma jiri doonto qof kale oo go'aamin doona waxa kugu dhacaya noloshaada laakiin adiga.
Tani ma noqon doonto dareen cajiib ah?
Halkii laga xishoodi lahaa, niyadjab iyo guud ahaan dareenka dareenka daalan iyo hoos udhaca inaad hadda dareemeyso inaad dareentay.
Waad ogtahay inaad ka fiican tahay tan ... iyo sidoo kale kuwa aad jeceshahay. Waxay rabaan adiga ugu fiican. Ma aha sida hadda aad hadda.
Anigu waxaan kuu ballan qaadi karaa, haddii aanad hadda qaban Karin oo aan ka helno Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nadiifinta ee dabiiciga ah, waa arrin kaliya waqtigii ka hor intaanay dabeecadaha kale ee miisaanka la xidhiidha gooyaan noloshaada ...
Jinniyo sida Diabeteska ...
Dhiig karka sare ...
Kolestaroolka sare ...
Kuwani waa uun bilawga ...
Maaha in la sheego dhibaatada maaliyadeed ee weyn ee jinniyada ay ku yeelan doonto qoyskaaga ...
Miyaad haysataa naqshad lacag caddaan ah oo dheeri ah, si aad u hubiso inaad ku dabooli karto biilasha caafimaadka ee aadka u weyn ee aad dhawaan u baahan tahay inaad bixiso, haddii aadan talaabo qaadin?
Waqti intee le'eg iyo lacag ah ayaad rabtaa inaad ku lumiso daaweynta calaamadaha aad u culus tahay, markaad daaweyn kartid dhibaatada aasaasiga ah oo aad ku celin karto dhammaan xaaladahaaga caafimaad oo aad dib ugu soo celiso jirkaaga, caafimaadkaaga iyo kalsoonidaada - mar iyo dhammaanba?
Haddii aadan heli this xalin, meel hoos line ee ... waxa laga yaabaa in sida ugu dhakhsaha badan berri, ama wakhtiga 10 sano ... doonnaa in aad la sariirta isbitaalka jiifa la tuubooyinka joogtid oo idinka mid ah, iyo mishiinka wadnaha la khali ilaa laabtaada, marka aad caawinaynin indhuhu at saqafka ...
Iyada oo xubnaha qoyskaaga taagan idiin talisa, cabsi iyo walwalsan jiran ...
Maxaa ka dibna waxa uu socon doonaa iyada oo loo marayo madaxaaga?
Deep hoos gudaha, haddii aad rabto in aad u galin ama aan, aad u ogaato in ay baruurta si weyn u kordhiyaa fursadaha qaar ka mid ah cudurka laga cabsado ama weerar qalbiga lama filaan ah kugu soo dajinay oo kana xoogbadan iyagoo ...
Waan ogahay in aan kiiska, mid ka mid ah fikirrada in ugu i murugoodo wuxuu ii ahaa xaaska isagoo si ay u tagaan raadiyo qof kale, inay i bedelo ka dib markii aan tegey ...
Oo kids kor u sii kordhaya iyada oo qaar ka mid ah aabbe oo kale, ama uusan ka dhamaan ...
Oo haddii aad jeceshahay u leeyihiin in ay u guurto on, mar aad tagtay, aad runtii iyaga eedayn karaa?
Gaar ahaan marka aad u ogaato aad looga hortagi kari lahaa oo dhan of this, haddii aad hada isku dayay this Cawaysimina idinkoo No System barafku Fat maanta?
Aynu u wajihi, isagoo baruur ma aha dhibaato yar oo aad iska indho tiri karno, oo kaliya rajaynayaa in ay "iska tagaa."
The ka weyn line dhexda aad, dhibaatooyinka ka badan aad ku socoto in ay la kulmaan ...
Haddii aadan talaabo ka qaado, waxaa aad u wanaagsan in aad ku kici kara caafimaadka, noloshaada galmo, aad mustaqbalka dhaqaalaha, guurka, qoyskaaga, iyo wax kasta oo aad qaban qaaliga ...
Taasi waa sababta marka aad fiiriso kharashka ku lugta leh MA talaabo, waxay noqon kartaa si buuxda u xun ... jidh ahaan, dareen ahaan iyo dhaqaale ahaan.
I aamini, Waxaan ku kabihiinnu ... Waxaan ahaa baruurta, iyo inaan ogahay sida saxda ah sida ay u dhigaysa aad dareento ... Waxaa Doomaha aad ku kalsoonaan karto ... Waxaa cunaa hilibkiisa aad isku kalsooni ...
Waxaad ka fogaataa xaaladaha aad dareentid raaxo, iyo joojin ku nool nolol aad rabto. Jirkaaga noqdo aad xabsiga ... weyn oo aad ka heli, yar ah oo aad xabsi ku noqdo. Aan halkaas joogay ... Waxaan bartay habka ugu adag ... iyo waxaan ku dhowaad bixiyay baadi goobka.
Waad og-aragnimada aniga ii gaar ah la dagaallanka "Jinni cayilka," iyo wixii aan u lahaa in ay dhex maraan si loo hubiyo in aadan u oggolaan in qaddar in ...
Oo anna waxaan ogahay waaqiciga sida isku dayaya in ay "daweeyo" calaamadaha keliya ee dheeraada xanuunka.
Sidaas daraaddeed i daa aan aad weydiiso su'aal halis ah ...
Waa maxay nooca qiimaha lahaa inaad meel koorso in dhalaaleen doonaa baruurta si joogto ah, soo celinta aad ku kalsoonaan karto, oo wuxuu idin siin natiijada dhabta ah ee yar sida 7 maalmood?
Waan ogahay wax badan oo rag iyo dumar, kuwaas oo farxad ku bixin lahaa maal ah mudnaan this ...
Oo kaliya ka fekero waqtiga iyo lacagta aad ayaa laga yaabaa in mar hore khasaariyey on "kiniinka mucjiso," cuntada qaab, qalabka jimicsiga, tababarayaasha shakhsi, xubinimada jimicsiga, ama siyaabo kale oo ay lumiyaan miisaan badan oo aan ku siin natiijada ay yabooho.
Ka dib markii la isticmaalayo aan fudud System barafku Fat No-micne lahayn , ayaan lahaa ardayda ii sheeg waxay siin lahaa ka badan $ 1.997 oo kaliya in ay u helaan this macluumaad horumar degdeg ah ...
Laakiin warka wanaagsani wuxu yahay, anigu ma ihi qaar ka mid ah CEO hunguri Big Pharma kuwaas oo kaliya dan ah oo ku saabsan jeebkooda uu. Waxaan ahay kaliya qofka celcelis ahaan adiga oo kale. Waan ogahay waxa aad ku socoto iyada oo ...
Faraqa kaliya ee waa, nasiib ku filan in lagu turunturoodaan qarsoodi ah in loo oggol yahay igu ogaan this "Sida caajis" si ay u gubaan baruurta si dhakhso ah oo dhan-dabiici ah waxaan ku jiray.
Sidaas ma doonayo inaan si aad u weydiiso in aad bixiso $ 1.997.
Ma noqon doonto $ 997. Waxa aan xitaa waxay noqon doontaa $ 197.
Your maanta maalgelinta oo keliya waa markii mid ka mid ah oo keliya, si buuxda deposit celin waayo lacagta aad hoos ka eeg video ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan la this bixinta lacag la'aan ah, laakiin fadlan Waxaan fahamsanahay ayaa dusha iyo kharashyada aan u baahan tahay in ay bixiyaan, si ay u sii website this online ...
Iyo kharashka website way sii kordhaya waaweyn bil kasta, kumanaan rag iyo dumar ka badan ogaan this site maalin kasta ... Waxaan sidoo kale u baahan tahay inaad bixiso kooxda Support Customer saaxiibtinimo ayaa la heli karaa si ay kuu caawiyaan 24 saacadood maalintii, todoba maalmood todobaadkii.
Laakiin waxa aan weydiinaya idiin runtii waa kaliya deebaajiga la soo celin ...
Maxaa yeelay, haddii ay dhacdo in lagama yaabo in aadan xan faraxsanahay natiijada aad ka hesho aan System barafku No-Cawaysimina idinkoo Fat, debaajigaaga hal mar waa 100% celin.
Waxaad email u diri kartaa kooxdeyda Taageerada Macaamiisha saaxiibtinimo, iyo hesho dinaar kasta dib waqti kasta in ka badan 60 maalmood ee soo socda.
Waxaan ku talinaynaa in aad u gasho nidaamka, mari qarsoon, ka dibna go'aan ka gaadho in aad dib u rabto in aad deposit celin. Aad heysato koox buuxda oo 60 maalmood ah inay sidaa sameeyaan.
Sida aad arki karto, ayaan saaro halista oo dhan waxaad ka oo wuxuu dhigay garbaha aniga ii gaar ah oo ku saabsan ... sidaas darteed hadda, waxaa gabi ahaanba wax cudurdaar ah ma siinayo this day ah.
Xusuusnow, kaliya haddii ay dhacdo in aad go'aan ka aad rabto in aad deebaaji dib, sabab kasta, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa noo soo diri email ah. Waxaad arki doonaa sida ay u kala xidhiidh kooxdayada Taageerada Macaamiisha mar aad soo gashid Xubnaha Area our markaana ay u helaan nidaamka.
Sidaas waxaad ku arki, runtii waxaan ahay ma li'I waxaa laga yaabaa in aad u maleeyay in aan ahaa markii aad bilowday akhriska page.I'm this nooc uun ah "macno darro maya" ee nin kaasoo ka go'an in ay aad u hesho natiijooyinka.
Laakiin waxaan idinku leeyahay doonaa in ilaa hadda, dad aad u yar ayaa ka codsaday dib u deposit ay. Halkii, waxaan u hesho emails maalin kasta ka rag iyo dumar da 'walba oo doonaya in ay na mahad.
Currently, waxaana beddelaya nolosha in ka badan 383 oo qof maalin walba, dunida oo dhan ...
Sidaas oo keliya in ay gebi ahaanba kuu sahlo oo waxaad ka samaysaa this a no-brainer, halkan our Iron-u guntaday, 100% Guarantee Money Back:
Haddii aan No-Cawaysimina idinkoo System barafku Fat aanu ku siin ballaaran, isbedelka beddelaya nolosha in aad rabto in aad iyo qalmaan ...
Oo aanan hadalka ku saabsan fudud hoos a pound ama laba, aan la hadlayo ku saabsan nooca isbedel in aad saaxiibo, co-workers iyo xubnaha qoyska aad weydiinaya SIDEE baad u samaysay ...
Markaas ayaan ku adkaysanayaan in aad email kooxdeyda Taageerada Macaamiisha 24-ka saac waqti kasta in ka badan 60 maalmood ee soo socda, iyo weydii in ay aad deposit soo laabtay buuxa. Waxaad ku heli doontaa dib, dinaar kasta, su'aalo ma la weydiiyay.
Just xusuusan - aad leedahay oo dhan laba bilood, ama buuxa ah 60 maalmood, si aad u codsato aad deposit in lagu soo celiyaa.
Haddaba, tan aad this daawaday meel fog, waan ogahay in aad tahay mid aad u xiiso. Waxaad tahay oo ku saabsan diyaar u ah inay talaabo ka qaado ...
Sidaas daraaddeed ha i jirnay heshiiska by idin siinayo soo socda "gunooyinka Action Fast" marka aad maanta isku day aan System barafku Fat No-micne lahayn:
Action Fast Bonus # 1 -
The "Flab Caloosha No More" Exclusive Report (A $ 47 Value)
qiimaha-buuxiyey oo Tan, no-fluff warbixin idin tusiyo dhab ahaan waxa aad u baahan tahay in la sameeyo si ay u gubi baruurta caloosha beegsaday agagaarka qeybta bartamihii.
Just la digay, waxaan wararka ka ardayda in aan helay mid ka mid kaliya oo ka mid ah siraha badan ee guide bonus tani waa ku filan si aad surwaal "jir ah" oo macno ahaan dhaco dhexda, maxaa yeelay, waxaad doontaa in la si deg deg ah ku milmeen caloosha baruurta ...
Sidaas hubi in aad diyaar u tahay inay bilowdo adeeganaya qaar ka mid ah dhar cusub tahay!
Next, waxaan doonayaa inaan idin siin ...
Action Fast Bonus # 2 -
The Gudaha "Instant Metabolic Kicinta" Report (A $ 97 Value)
Ma ogtahay waxaa jira a "baruurta ku biiro gubanaya" jirkaaga gudihiisa hadda - in la demiyo? Ha ii aad tusto sida loo dhakhso leh dib u beddelaan, si aad u supercharge kartaa dadaalada miisaanka oo yaraada.
Marka aad aragto sida ay u dhaqaajiso aad ku biiro gubashadii baruurta, aad shiid soo dedejin doonto in ay heer ka sii sareeya oo waxaad heli doontaa natiijada xaydha-barafku xataa dhakhso.
Oo sidaas maaha oo dhan. Waxa kale oo aad ka heli doonaa ...
Action Fast Bonus # 3 -
The "Shan Daqiiqo Fat Buster Taxanaha" (A $ 177 Value)
Haddaba eegto, aad ku socoto in ay ku raaxaysan natiijada miisaan lumis yaab leh oo keliya iyadoo la isticmaalayo habka ugu weyn, oo markii aan sheegay waxaa jiray eber tamarta ku lug, waxaan la micno tahay ...
Laakiin haddii aad wax kama qaba qarash kaliya dhowr daqiiqo maalintii sameynayo qaar ka mid ah jimicsi fudud laakiin super-ool ah, aad u dardar-karaa natiijada IYO beddesho aad flab galay caatada ah, muruqa sexy.
Inside this taxane video gaar ah, kaas oo aad karaa oo keliya heli by isku dayaya aan No Cawaysimina idinkoo System barafku Fat maanta, waxaad heli doontaa layliyada baabi'iyaasha ah baruurta shan daqiiqo sahlan oo dhakhso ah oo aad samayn kartaa in raaxada gurigaaga adiga kuu gaar ah.
Sidaas daraaddeed i daa aan idin xusuusin ah gunooyin dheeraad ah oo lacag la'aan ah aad ku socoto in ay isla helaan marka aad isku daydo aan No Cawaysimina idinkoo System barafku Fat maanta:
The " Flab Caloosha No More " Exclusive Report (A $ 47 Value)
The " Metabolic Kicinta Instant " Warbixinta Gudaha (A $ 97 Value)
Oo The " Shan Daqiiqo Fat Buster " Video Taxanaha (A $ 177 Value.)
Taasi waa $ 321,00 oo qiimaheedu qiimaha dheeraadka ah ee aad hesho marka aad ii No Cawaysimina idinkoo System barafku Fat maanta isku day ah, gebi ahaanba halis-free.
Xasuuso, tani waa habka kaliya ee soo baxay waxaa ku daadisa pounds iyo dumiso aad nno miisaan la xiriira si joogto ah, by weerarka dhibaatada ay muhiimka ah.
Oo haddii ay dhacdo aad go'aansato in aad weydiisato aad deposit in lagu soo celiyaa, waxaad weli heli doonaa si ay u sii System xaabo uu No Cawaysimina idinkoo Fat, oo ay la socdaan gunooyinka oo dhan.
Taasi waa ka yaraan baan u samayn karaa, si aad ugu mahad naqayaa, waayo, daawashada bandhig this iyo this siinayo isku day ah.
Sidaas hor tagaan. Riix "Add To Cart" button ka hooseeya. Wax macno ah ma haddii ay saddex subaxdii - marka aad riix badhanka in, aad doonaa in loo qaadaa our ammaan Iibsiga Page, halkaas oo aad ka buuxin doonaa foomka deg deg ah. Waxay qaadan doonaa 30 labaad, dushiisa.
Haa! Kaliya $ 37 - Iyadoo A 100% Money Back Guarantee Full!
HEL DEGDEG ACCESS, 365 MAALMOOD SANNADKII, 24HOURS MAALIN!
faahfaahinta lacag bixinta iyo macluumaadka shakhsiga ah loo hayn doonaa si qarsoodi, maxaa yeelay taasi waxay Iibsiga Page waa sir la 256-Inyar technology ugu dambeeyay encryption.
Iyo in la sii ilaaliyo arimahaaga gaarka ah, waxba ku saabsan System xaabo uu No Cawaysimina idinkoo Fat ka muuqan doontaa credit card ama warqadda bangigaaga.
Waxa kaliya in ay muujiyaan ilaa noqon doonaa amar ka "CLICKBANK," taas oo ah processor ka aamin bixinta in aan u isticmaalno. (Waxay ka arrinsashada ka badan 100,000 oo xawaalad aamin ah maalin walba.)
Laakiin aad u baahan tahay in hadda tallaabo. Waxaan si daacad ah ma aqaano sida badan ayaan haysan kartaa qiimaha yar yahay ka hor inta aan lacag LUMIN, by ficil ahaan u siiyo iska waayo, sidaas raqiis ah ...
Haddaba sidaas daraaddeed waxa la joogaa wakhtigii si aad u riix "Add To Cart" button ka hooseeya, buuxiso magalka bogga soo socda, oo aad hesho degdeg ah si dhamaystiran Cawaysimina idinkoo No System barafku Fat u helaan, oo lagu daray dhammaan lacagihii dhakhso-tallaabo free.
Waxaan ku hanweynahay inaan AAD isagoo our story soo socda guusha.
Ogaaw in aad xor inuu i diro email ah oo ii sheeg oo ku saabsan guusha cajiib AAD la leeyihiin ...
Just siin shot a, oo hubi in uu u bedeli doonaa noloshaada ka fiican, laga bilaabo kaliya 60 ilbiriqsi ka hadda waxaan ahay.
Sidaas waxa aad sugayso?
Riix "Add To Cart" button hoos iyo dhamayso magalka.
Waxa kaliya ee waxay qaadataa 30 ilbiriqsi inaad buuxiso foomka ku yaal bogga soo socda, iyo 60 ilbiriqsi gudahood aad leedahay doonaa habka complete, iyo dhammaan lacagihii ay, xaq idinka soo hor jeedda aad screen.
Hadda, aad asal ahaan ka helay saddex doorasho ...
Xulashada 1 - Waxaad la xiro karo this page oo ay sii wadaan in ay ku noolaadaan aad nolol sida caadiga ah, iyo sii helayso natiijadii caadiga ah. Niyad More, ceeb, jahawareer iyo cabsi ku saabsan meesha aad caafimaad waxaa madax ...
Markaas waxaa jira Xulashada 2 - Waxaad isticmaali kartaa aqoonta aad faa'iiday ka soo bandhigidda si "garabka waxa" iyo isku day in this xisaabiso on adiga kuu gaar ah.
Laakiin bal aynu u wajihi: haddii aad ogtahay qarsoodi ah barafku saxda ah baruurta in ay gudaha nidaamka this, ma jirto "maxkamad iyo qalad" waxaa laga sugayaa inay si joogto ah u xaliyo arrinta dhabta ah oo sababaya ka dambeeya dhibaatada miisaanka.
Iyo sababta aad xitaa doonayaan in ay tijaabiyaan oo suurto gal ka dhigi aad dhibaato ka xun, markii System xaabo uu No Cawaysimina idinkoo Fat ka saaraysaa oo dhan oo ka mid ah alala iyo gacmaha aad xalka?
Ka dibna, aad leedahay Xulashada 3 - Waxaad isku dayi kartaa System barafku Fat No Cawaysimina idinkoo maanta iyo hagaajin dhibaatadan mar oo dhan by faa'iidaysanaya this deeqsi ah, waqtiga xadidan oo dalab si buuxda u soo celin.
Waxaad heli doontaa nidaamka dhameystiran, oo lagu daray xirmada bonus complete, oo dhan, waayo, mid ku yar, 100% deposit celin.
Xusuusnow, gunno ah on iyaga u gaar ah waxaa lagu qiimeeyay $ 321,00 oo ay ka qiimo ka badan qiimaha dhigaalka.
Si fudud riix badhanka si ay hoos, oo ka soo buuxiso jeegaaga geedi socodka.
Xusuusnow, aad hesho si aad this isku dayi soo baxay oo dhan 60 maalmood ka hor intaadan go'aansan in aad rabto in aad weydiiso dhabarka deposit celin.
Haddii aad this daawaday fog, waa in aad la qanciyay laba shay:
Mid ka mid ah, aad aadan awoodi karin in ay sugaan maalin kale in ay la tacaalaan arrimaha miisaanka iyo iyaga mar oo dhan u xaliyo. (Oo sababta aad u dooneyso inay sugto, marka xalka sugaya idiin bogga xiga
waana u fudud, amaan ah oo dhan-dabiiciga ah?)
Laba, maxaa yeelay, dalab this waa si buuxda u khatar la'aan, waxaa si fudud aan dareen ka dhigi lahaa in ay kor u noqotay fursad ama u sheeg naftaada, "waxaa laga yaabaa in goor dambe." Markii ugu soo socota aad isku daydo in ay soo booqdaan website this, qiimaha laga yaabaa in ay saddex laab ama xataa laabantay .
Hadda waa waqtiga ay dib u hanato caafimaadkaaga, farxad iyo xoriyad. Riix "Add To Cart" button ka hooseeya oo buuxi foomka yar ee degdeg ah ee bogga soo socda. Waxay qaadan doonaa 30 ilbiriqsi, dushiisa.
Ha illoobin, our Iibsiga Page 100% oo nabad iyo xasilooni, iyo faahfaahinta loo hayn doonaa gebi ahaanba si qarsoodi ah.
Marka aad buuxiso magalka, tagayaan No System barafku Fat ah, oo lagu daray dhammaan lacagihii ugu, waa la dhigi doonaa inaad for on your screen 60 ilbiriqsi gudahood.
Riix "Add To Cart" hoos, iyo ficil hadda qaato.
Ha sugin wax dheer ...
Hadda waa waqtiga si ay u qaadato lacag iyo dib u hanato aad farxad iyo xoriyad aad.
Hadda waa waqtiga si joogto ah dib u celin iyo xalinta dhibaatooyinka miisaanka ...
Oo waxaad si ay ugu biiraan madaxda sare ee kumanaan arday mahadisaan ugu danbeyn waa ku haboon, sexy iyo dareen weyn!
Sidaas daraaddeed ha u dhigin wax kasta oo dheeraad ah. Riix "Add To Cart" button ka hooseeya, oo aynu aad u bilowdo.
BILOW LUMINTA MIISAANKA MAANTA!
Home | Contact | Terms of Service | Privacy | Taageerada | Afeef | xulufadeeda
All Copyright © Waxyaabaha 2016-ka - 2017 NonNonsenseTed.com
ClickBank waa tafaariiqle ee alaabta this. CLICKBANKÂ® waa summad ka diiwaan of Sales Click, Inc., shirkad Delaware a ku yaala 917 S. Lusk Street, Suite 200, Boise Idaho, 83706, USA iyo sida loo isticmaalo by ogolaansho. doorka ClickBank ee sida tafaariiqle kama dhigna ah ayidaad, ansixinta ama dib u eegis ah ee badeecada ama wax sheegasho, qoraal ama fikrad loo isticmaalo in kor u qaadidda wax soo saarka this
content website The iyo alaabta for sale waa ku salaysan ra'yiga qoraaga oo waxaa la siiyaa oo keliya ah "AS WAA" oo ku saleysan "AS HELI". Waa in aad si taxadar leh u sameeyaan cilmi kuu gaar ah iyo xaqiijin macluumaadka la ilaha kale marka raadinaya warbixin ku saabsan arrimaha caafimaadka oo had iyo jeer dib u eegto macluumaadka la bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga xirfadeed ka hor inta la isticmaalayo mid ka mid ah hab maamuuska lagu soo bandhigay bogga internetka ee this iyo / ama in alaabta halkan iibin . ClickBank mana qoraaga Midkoodna ku hawlan haya'ad adeegyada xirfadle caafimaad ama la mid ah ama talo via website this ama sheyga, iyo macluumaadka lagu siiyey ayaa la looguma talagalin inay talo caafimaad bixiyeen by dhakhtar ama bixiye daryeel caafimaad oo shati kale. Waa in aadan construe sale ClickBank ee wax soo saarka this ayidaad ah by ClickBank fikradaha ay ka muujiyeen, taasina, ama damaanad ama damaanad wax istaraatijiyad, talo, daaweynta, ficil, ama codsiga talo by author ee alaabta sameeyey.